Madheshvani : The voice of Madhesh - १६० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्न लागेकोे प्राइम लाइफको आशालाग्दो प्रगति
१६० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्न लागेकोे प्राइम लाइफको आशालाग्दो प्रगति
१६० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्ने क्रममा रहेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (PLIC
Prime Life Insurance Company Limited (PLIC)
1,140.00 - 2,895.00
180 Days Avg.
29.35 (FY: 073-074, Q: 3)
25% (FY: 073-074)
) ले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा विगतको भन्दा केही आशा लाग्दो वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरण अनुसार वीमा शुल्क आर्जनका साथै बीमाकोषको आकार र नाफामा समेत बढोत्तरी आएको छ ।
कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षको पुष मसान्तसम्ममा ११ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१८ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।
कम्पनकोे यसअवधिमा बीमा शुल्क आर्जन समेत बढेछ । गतबर्षको पुष मसान्तसम्म ८४ करोड २४ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेको कम्पनीले चालु बर्षको पुष मसान्तसम्म एक अर्ब २ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जैन मात्रै ९३ करोड ३५ लाख छ ।
कम्पनीले यसअवधिमा १५ करोड ५६ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ । गतबर्षको यसै अवधिमा १४ करोड १५ लाख दाबी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले यसअवधिमा ५१ वटा बीमा लेखको एक करोड ६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
चुक्ता पुँजी ६१ करोड रुपैयाँ भएको यस कम्पनीको जगेडाकोषमा ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, जीवन बीमा कोषमा ५ अर्ब ५७ करोड तथा महाविपत्ती कोषमा ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले गतबर्षको यसैअवधिको तुलनामा जगेडाकोष, जीवन बीमा कोष र महाविपत्तीकोषको रकम उल्लेखीय रुपमा बढाएको छ ।
यसअवधिमा प्राइफको प्रतिसेयर आम्दानी ३७ रुपैयाँ ७ट पैसा, मूल्य आम्दानी अनुपात ४५ रुपैयाँ ८२ पैसा, प्रतिसेयर नेटवर्थ २६६ रुपैयाँ ५६ पैसा तथा प्रतिशेयर कुल सम्पत्तीको मूल्य १३१४ रुपैयाँ छ ।
प्राइम लाइफले १६० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै गत कात्तिक २७ गते धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । जीवन बिमा कम्पनीले बीमा समितिको निर्देशन अनुसार २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने भएपछि प्राइमले हकप्रदको बाटो रोजेको हो ।
अनाधिकृत सेयर कारोबार गराउनेलाई अब लगाम, यस्तो आयो नयाँ व्यवस्था
विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली १ को २१६ मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने
‘भ्यालेन्टाइन डे’मा १ करोड २५ लाखको गुलाफ आयात हुने
किन धेरै घट्यो वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य ? तथ्यांकमा हेर्नुहोस्
नेप्से परिसूचक १४०० बिन्दुमा,
सरकारले तिर्न बाँकी ४४ अर्ब रकम १५ दिनभित्र भुक्तानी नपाए निर्माण कार्य बन्द गर्ने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी